UJohn Battaglia wabulala iintombi zakhe ukuba aziphindezele uMfazi wakhe
UJohn David Battaglia wadubula waza wabulala iintombi zakhe ezimbini ukuba athathe kunye nomfazi wakhe owayengumfazi wokuqala ukuba amxelele kwigosa lakhe lepolole ngokuphula umthetho.
Omnye owayengumNayile kunye neCPA, uJohn Battaglia wayebathandwa kakhulu ngabahlobo bakhe kunye nosapho. Wabonakala engumfana omhle-omnandi onomdla kwaye ekhangayo. Yiloo nto uMaryJean Pearle wacinga xa wamtshata, kodwa ngobusuku babo bomtshato, uhlangothi lwaseBattaglia lwaqala ukuvela.
Ekuqaleni, wayeza kubhabha kwisibamba aze alahle amagama ambalwa okuthukisa kunye nokuthuka kumfazi wakhe omtsha. U-Pearle akayithandanga, kodwa wayebekezela ngenxa yokuba babelane ngamaxesha amaninzi amahle kunobungozi. Ngomnyaka olandelayo intombi yokuqala, ukholo, wazalwa waza wabukhulula, iminyaka emithathu kamva. Ngoku kunye nosapho ukuba uqikelele, uPerarle wazama kunzima ukwenza umtshato usebenze.
Ubomi obunzima kunye neNfihlakalo ezifihliweyo
Ukuhlala kwindawo ephakamileyo yaseDallas, intsapho encinci ibonakala inobomi obungabonakaliyo. Kodwa ngaphakathi kwindlu, izibhengezo zeBattaglia ezinobundlobongela zaqala ukuqhubela phambili. Wayethetha kakubi uPearle, ememeza ngokunyaniseka kuye kwaye embiza ngamagama angcolileyo.
Njengoko ixesha liqhubeka, ukuhlaselwa ngamazwi kwahlala ixesha elide kwaye kumzame ukugcina intsapho yakhe kunye, uPerarle wanyamezela. Amantombazana ayemnqula uyise, owayesoloko ebengumntwana onobubele nothando kubo, nangona ulaka lwakhe olusuka kuPearle lwaqhubeka lukhula.
Kwaye ngobusuku obubodwa, umsindo wakhe usuqukile kwiPararle yokuhlambalaza ekumlandeleni. Wakwazi ukuhamba waza wabiza i-911. Ibhettali yafakwa kwiingxaki kwaye nangona evumelekile ukuba abone amantombazana, akavunyelwe ukungena ekhaya.
Ukuhlukana kwanika uPerle ithuba lokucinga kwaye akuzange kuthathe ixesha elide ukuba aqaphele ukuba emva kweminyaka emininzi yokuxhaphazwa kunye nokuba nabantwana bakhe babonakale kuninzi lwayo, ukuba kwakuyisikhathi sokufaka umtshato.
Ngomhla weKrisimesi ngo-1999, uParle wavumela iBattaglia ukuba ifike ekhaya ukuze ihambe kunye namantombazana. Ukutyelela kwaphela kumabini abo baphikisana kwaye iBattaglia ihlasela iParley. Wambetha ngamandla ngamandla ekhanda lakhe njengoko wayezama ukuzikhusela.
UBatagaglia wabanjwa waza wahlawuliswa ngokuhlaselwa. Wabeka iminyaka emibili yokuvavanywa kwaye wayenqatshelwe ukudibana noPearle. Kwakungenako ukutyelela iintombi zakhe iintsuku ezingama-30.
Xa iintsuku ezingama-30 zaphela, ukuvakashelwa kweveki rhoqo ngeveki kwaqala kwakhona kunye nokubethelwa ngamagama kumntu owayengumfazi.
Ukurhaxela kunye nentukuthelo
Umtshato uqhawule ngo-Agasti olandelayo, kodwa oko akuzange kuvimbele iBattaglia ukuba ayishiye imilayezo engcolileyo kwaye isoloko isongela kwifowuni yangaphambili yomfazi. Njengoko iisongelo ziqhubekile, uPerarle waba noloyiko lokuba ngelinye ilanga umyeni wakhe owayengumyeni wayengenza ngokuqinisekileyo oko wayekuthethayo, kodwa ingcamango yokuba uya kuphazamisa amantombazana akazange angene engqondweni yakhe. Ukutyelela phakathi kwamantombazana kunye noyise baqhubeka.
Emva kokufowunelwa ngokukrakra evela eBattaglia ngo-Ephreli 2001, uPearle wagqiba kwexesha lokufumana uncedo. Waqhagamshelana negosa lakhe langaphambili lomyeni waza wachaza ukuba wayesenza iifowuni ezisongelayo, okwakunokuphulwa kweparolele yakhe.
Kwiiveki ezimbalwa kamva, ngo-Meyi 2, iBattaglia yafumanisa ukuba i-parole yakhe yachithwa kwaye mhlawumbi iya kubanjwa ngenxa yeefowuni azenzile kumfazi wayo wangaphambili kunye nokuvavanya ukuba inambuzane . Waqinisekiswa yipolisa ukuba i-warrant yayingayi kuqhutyelwa phambi kwabantwana bakhe kwaye ukuba angenza amalungiselelo kunye negqwetha lakhe ukuba aphendulele ngokuthula.
Wayecwangciswe ukuba abe namantombazana ukuba adle ngokuhlwa ngaloo busuku noPearle, engazi ukuba uBatagaglia wayenolwazi olwamxelele kuye igosa lakhe lepolulule, wawahlalisa amantombazana naye kwindawo eqhelekileyo yokuhlangana.
Kamva ngaloo mini, uPearle wathabatha umyalezo evela kwenye yeentombi zakhe. Xa ebuyisela umnxeba, iBattaglia yafaka umnxeba kwi-phonephone, kwaye yaxelela intombi yakhe ukholo ukuba ibuze unina, "Kutheni ufuna ukuba uTata abe ejele?"
Emva koko uPearle weva intombi yakhe imemeza, "Hayi, Tata, nceda musa, ungenzi." Izibhamu zamlandela ukukhala komntwana waza uBattaglia wamemeza esithi, "Ukunyamezela (ihlazo) iKrisimesi, ngoko kwakukho izibhamu ezininzi." UMary Jean Pearle waxhoma umnxeba wabiza nge-911.
Emva kokudubula iminyaka engu-9 ubudala Ukholo kathathu kunye no-Liberty iminyaka emihlanu uBattaglia waya eofisini apho wayeshiya khona umyalezo omnye, kodwa ngeli xesha kwiintombi zakhe ezifile .
Uthi: "I-Goodnight yam iintsana," watsho. "Ndiyathemba ukuba uhlala kwindawo eyahlukileyo. Ndiyakuthanda, kwaye ndiyathanda ukuba ungananto nomama wakho.
Emva koko wadibana nentombazana waza waya kwibharki waza waya kwisitorethi sakhe kwaye wayenombhobho ebomvu ebhentshiweyo kwisandla sakhe sasekhohlo ekuzukeleni iintombi zakhe ukuba wayesanda kubulala.
UBatagaglia wabanjwa njengoko eshiya i-tattoo shop ngo-2 am Kuthatha amagosa amane ukuba amthinte aze amkhonze ngesandla. Amagosa athatha i-revolver elayishiwe ngokupheleleyo kwiloli yaseBattaglia emva kokubanjwa kwakhe. Ngaphakathi kwendlu yakhe, amapolisa afumana izibhamu ezininzi kunye ne-pistol ngokuzenzekelayo ezisetyenziselwa ukudubula ehleli ekhitshini.
Ukholo lwaluphethe amanxeba amathathu, kubandakanywa nesibhozo kumqolo wakhe owawunqamle intambo yomthambo wakhe waza waphupha i-aorta, umnxeba wadutshulwa emva kwentloko yakhe eyaphuma ebunzini lakhe, kunye nesibhozo ehlombe lakhe. Kungakhathaliseki ukuba iibhola ezimbini zokuqala ziza kuba zibulawe ngokukhawuleza.
Inkululeko eneminyaka emithandathu ubudala inemivimbo emine yokuqhuma kunye nenxeba lokudla kwintloko yayo.
Enye ipulangwe yamngena, yahlula intambo yomgogodla, yadlula emphunjini, yafakela esifubeni sayo. Emva kokulahlekelwa yintathu yesithathu egazini lakhe, wafumana unxibelelwano oludityanisiweyo entloko yakhe eyadlula ngqondweni yakhe, waphuma ubuso bakhe, waza wafa ngokukhawuleza.
Imbali yokuhlukumeza iyabonakaliswa
Ngemizuzu engaphantsi kwe-20 yombono, ijaji yafumana iBatgaglia inecala lokubulala.
Ngethuba lesigwebo sesilingo, umfazi wokuqala waseBatagaglia, uMichelle Gheddi, wangqina ngokuxhaphazwa kwakhe ngexesha lomtshato walo osukela ngo-1985 ukuya ku-1987, emva koko emva kokuqhawula umtshato.
KwabaseBattaglia babechukumisa ngokomzimba kwindodana kaGeddi kumtshato ongaphambili. Ngesinye isikhathi uNksz Gheddi ehamba noBatagaglia emotweni, waba nomsindo kwabanye abahamba ngemoto waza wazama ukufikelela kwisibhamu ebesemotweni. Bahlula emva kwesiganeko apho iBattaglia yabetha uGheddi ngoxa wayephethe intombi yakhe uKristy, ebangela ukuba alahle umntwana.
Emva kokuhlukana, uBatgaglia wambamba uGheddi, wambheka ngeefestile zendlu yakhe, wamlandela emotweni yakhe kwaye wakwazi ukuphepha umnxeba wakhe. Wabiza abaqeshi bakaGheddi kunye nababolekisi bamenza iingxelo zobuxoki ngaye.
Watshitshisa ukuzibulala yena kunye naye, waza wachaza ngokucacileyo ukuba wayecwangcise njani ukumnqumla aze ambulale ngommese. Ngobunye ubusuku uGheddi waphaphama kamva emva kobusuku bobusuku ukuba afumane umyeni wakhe owayengumntu omileyo ehleli phezu kombhede wakhe kwaye ebambe amahlombe akhe. Wayefuna ukulala ngesondo, kodwa wavuma. Kamva wafaka ingxelo yamapolisa malunga nesiganeko.
NgoJanuwari ka-1987, iBattaglia yachitha iintsuku eziliqela entolongweni emva kokuphonsa ilitye eGeddi ngefestile yemoto. Emva kokukhululwa kwakhe, izinto zazibonakala ziphucula, kodwa ziphela ezimbalwa iinyanga.
UGheddi waphinda wafaka amacala malunga neBatgaglia emva kweepasodes ezimbini zobundlobongela. UBatagaglia wamncenga ukuba ahlawule iirhafu, kodwa wavuma.
Kamva ngaloo mini, waya kuGheddi ngaphandle kwesikolo somntwana wakhe. Ukumomotheka njengoko wayeza kuye, wathi kuye, "Ukuba ndibuyela ejele, ndiza kulungela ixesha lam." Emva koko wambetha uGheddi de walahlekelwa ingqondo, wayiphula impumlo waza wayihlamba umhlathi wakhe. Emva kokuphuma esibhedlele, wayesongela ukwenza okufanayo nonyana wakhe, ngoko wahamba waya eLouisana
Ngomhla ngomhla wokuba kubulawa u-Faith and Liberty, iBattaglia yashiya umyalezo kumshini wokuphendula uGeddi ethi mhlawumbi i-Pearl kufanele ilahlekelwe abantwana bayo. Washiya omnye umyalezo kamva kusihlwa kuKristy, wamxelela ukuba wayemthumelela imali kwiikholeji aze ayisebenzise ngobulumko.
Abathathu abaneengqondo zengqondo babonisa ubungqina bengqondo kaBattaglia xa ebulala abantwana bakhe. Bonke bavumelana ukuba iBattaglia ihlupheke ngenxa yokuphazamiseka kwe-bipolar , kwaye bonke oogqirha babecinga ukuba ngamachiza afanelekileyo kwaye phantsi kwemeko elawulwayo, wayengumngcipheko ophantsi wobundlobongela obuzayo. Bonke oogqirha babungqina ukuba uBatagaglia wayesazi into awayenzayo xa ebulala iintombi zakhe.
Ngo-Meyi 1, 2002, emva kokuxubusha malunga neeyure ezisixhenxe, i-jury yavuma nabashushisi abavakalelwa kukuba ukubulawa kwaba yi-Battaglia ukufuna ukuziphindisela ngenxa yezenzo zakhe zangaphambili kunye nokuba unokubeka ingozi kwixesha elizayo . UBatagaglia, owayeneminyaka engama-46 ubudala ngelo xesha, wagwetywa ngokubulawa kwegazi.
"Abahlobo Abancinane Kakhulu"
Ebhekisela kwiintombi zakhe ngokuthi "ngabahlobo bakhe abancinci," uBatgaglia watshela iThe Dallas Morning News ukuba akazange abe nomuzwa wokuthi wayebulewe iintombi zakhe kwaye "wayeyinto encinci engacacini into eyenzekayo."
Ngethuba lendlebe nodliwano-ndlebe uBatgaglia akazange abone ukuzisola ngokubulala iintombi zakhe, kunokuba afake uxanduva ngempembeko yakhe kumfazi wakhe wangaphambili, umtshutshisi, ijaji kunye neendaba eziendaba. Uthe uPearle wayebeka uxinzelelo lwezezimali kuye kwaye emva kokuqhawula umtshato kufuneka asebenze imisebenzi emibini ukuze aqhubeke noxanduva lwakhe.
Ngobusuku owabetha waza wawabulala iintombi zakhe, wathi ukholo lwamxelele ukuba uPearle wayezama ukumbanjwa. Exinezelekile, ediniwe, ecatshukile kwaye enqwenela ukuba uPearle ahlupheke, wenza into enye wayazi ukuba yayiya kumlimaza kakhulu. Wabulala oonyana, nangona uthi unako ukukhumbula kancinane isiganeko.
Ukuphunyezwa kweeHora eziHlulileyo ngaphambi kokuba iBattaglia ihlelwe ukuba ibulale
UJohn Battaglia, oneminyaka engama-60 ubudala, wayecwangciselwe ukulimala ngengozi ngoLwesithathu, ngoMatshi 30, ngo-2016, ukuphindezela ukubulala iintombi zakhe ezimbini, kodwa iNkundla yesiBheno ye-5 yeeNkundla zeziBheno yayimisa. Inkundla iyavumelana negqwetha likaBatgaglia ukuba unelungelo lokubiza ukuba unengqondo engenakulungelelaniswa nokunyanzeliswa ukuphandwa.
I-Battaglia ekugqibeleni yabulawa ngumjovo obulalayo ngoFebruwari 1, 2018, kwi-Penitenti State Penitentiary eHuntsville, eTexas.
Yayiyiphi Impumelelo Yokuqala Yokusabela Kwezilwanyana Zesizwe?